Mousai anozivisa zvauri kuteerera neAudD API | Linux Vakapindwa muropa
Kwemakore mazhinji ikozvino, varidzi vema smartphone vanogona kuziva zviri kutamba mumasekondi. Yekutanga, kana kanenge inonyanya kuzivikanwa, kunyorera ndiShazam, ane kambani yakavambwa mu1999, asi haina kusvika pakatanga makore gumi apfuura, nekuuya kwemafoni efoni, kuti "boom" yakarova. Mune mamwe majaira, akadai semakomputa, iwe unofanirwa kutsvaga kwehupenyu hwakawanda, uye muLinux tine sarudzo senge mousi.
Zvita December takataura nezvazvo RwiyoRec, ko mutengi aive ani Shazam iyo inotibvumidzawo isu kuziva mabrowser nziyo kana isu tikachinja Mushandisi-Mumiriri kuti itende kuti takapinda kubva kuSafari. Mousai anoshandisa iyo API ye AudD.io, imwe nzira isina chikumbiro chepamutemo, asi iyi API inogona kushandiswa kugadzira yedu yega application, bot kana browser yekuwedzera.
1 Mousai, iri nyore desktop desktop
2 Zvakare inowanikwa seTeregiramu bot kana Chrome yekuwedzera
Mousai, iri nyore desktop desktop
Mune blog nezve Linux, chinhu chekutanga chatinofanira kutaura ndiMousai, desktop desktop. Kamwe yaiswa, inotitaurira kuti inoshandisa iyo audd.io API, uye kuti ichatitendera chete kuti tizive nziyo shoma pazuva kana tikasawedzera zita rekushandisa nephasiwedi. Patinopinda, izvo zvatinoona iwindo rakapfava rine mabhatani maviri: teerera (teerera) uye hamburger. Kuti tizive nziyo idzi, tinofanirwa kubaya bhatani rinoti «Teerera» uye mirira anenge mashanu.
Kubva pane hamburger dzesarudzo tinogona kujekesa nhoroondo, kumisazve chiratidzo (kubuda) uye kutiratidza nzira pfupi, dzatinofarira mbiri: Ctrl + R inoteerera uye Ctrl + C inomira. Kuti ndivarangarire, ndinofunga izano rakanaka kufunga kuti R Rekodhi uye C yakafanana nezvinoitwa mune inouraya. Uye kana tikarova bhatani rekutamba (Tamba) inotiendesa kune peji rewebhu kubva patinogona kuteerera rwiyo pane akasiyana masevhisi, akadai seSpotify kana YouTube Music.
Kuisa Mousai, ingovhura iyo software chitoro uye tsvaga iyo app, sekureba sekunge isu tine package rutsigiro yakaitwa Flatpak uye chitoro che software chinoenderana. Kana zvisiri, inogona zvakare kuvakwa neGNOME Builder naMeson, sezvakatsanangurwa mu chirongwa GitHub peji. YeArch Linux-based operating system, inowanikwa kubva kuAUR.
Zvakare inowanikwa seTeregiramu bot kana Chrome yekuwedzera
Kutora mukana weAPI inoshandiswa naMousai hapana chikonzero chekuisa desktop desktop. Tinogona zvakare kushandisa iyo teregiramu bot kana the Kuwedzera kweChannel. Pakati pesarudzo mbiri dzakapfuura, ini ndinosarudza kushandisa bot, nekuti ini ndinogona kuishandisa pane chero chinhu, kusanganisira iyo PineTab ine Ubuntu Kubata. Mirira shazam.com, vakanaka maMousais.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » Kumirira Shazam.com, Mousai anozivisa zvauri kuteerera neAudD API